Guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare oo xaaladda dalka ka dayriyey – Radio Daljir
Guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare oo xaaladda dalka ka dayriyey
Seteembar 10, 2018 2:18 g 0
Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa ku dhawaaqay in ay qaadayaan tillaabooyinka degdeg ah oo wax looga qabanaayo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ku aaddan xiriirka sii xumanaaya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
Kulan ay maanta yeesheen Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ayey kaga hadleen xaaladdaha amni darro ee ka jira dalka iyo hanaanka Federaalka. Xildhibaanada Aqalka Sare waxa ay sheegeen in ay doorkooda matalaad ee maamul goboleedyada ay qaadan doonaan.
War ka soo baxay Aqalka Sare ayaa sidoo kale lagu sheegay in sababo Amni iyo Mid Farsamo ay kaga baaqdeen furitaanka Kalfadhiga 4aad ee Aqalka Sare, islamarkaana ay dib ka soo sheegi doonaan xilliga uu furmaayo Kalfdhiga Aqalka Sare.
Warka ayaa sidoo kale tacsi loogu diray dadkii maanta ay waxyeelado ka soo gaareen qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xarunta degmada Hodan ee Muqdisho.
Jaamacada Badda Cas oo Arday Deeq waxbarasho u dirtay (dhegayso)
Dowladda Qadar oo Maalgalinaysa Mashruuc Lagu Dhisayo Xarunta Wasaarada Qorshaynta